Pejy fandokoana zaridaina
Ny fiovan'ny vanim-potoana tsy tapaka dia tsy vitan'ny ankizy ihany. Alao sary an-tsaina ny fomba fijerin'ny hazo samihafa, ohatra, mandritra ny taona. Mety indrindra ho an'ny ankizy raha misy zaridaina ao an-trano, miaraka amin'ny raibe sy renibe na namana, izay ahafahan'izy ireo any ivelany amin'ny andro mafana.
Ary ny zaridaina iray dia tsy manampy ny ankizy hahatakatra natiora ihany, fa mahafinaritra ihany koa ny afaka mankafy “fotoana malalaka” ao amin'ny zaridaina. Azafady mba mariho koa ireo sokajy mifandraika aminay fizaran-taona ary Baume. Ny fikitihana ny sary dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny sary zaridaina isan-karazany ho an'ny fandokoana:
Fandroana dobo ao anaty zaridaina
Voninkazo ao anaty zaridaina
Fijery ny zaridaina
manapaka ny bozaka
Vavahady zaridaina sy fefy
Zaridaina ahitra eo am-baravarankely | ZARIDAINA
Mamorona fasika ho an'ny ankizy ao amin'ny zaridaina